Nagarik Shukrabar - पाँच गायिकाकाे 'साहसलाई सलाम'
आइतबार, ११ चैत २०७४, ०३ : २५ | अनिल यादव
शुक्रवार फलोअप : ‘सुरको आवरणमा यौन शोषण’
बिहीबार प्रकाशित शुक्रबार साप्ताहिकको कभर स्टोरीबारे उनको धारणा शनिबार सार्वजनिक भएको थियो । फेसबुकमामार्फत् उनले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति संगीतकारको हैसियतमा हैन संगितकार संघको अध्यक्षको हैसियतमा थियो । संघ यत्तिमै रोकिएन । गायिकालाई बयानका लागि बोलाउने, बहिष्कार गर्नेसम्मका धम्कीको चर्चा चुलियो ।
गायिकाहरु एन्जिला रेग्मी, मिना सिंह, सरु गौतम, सुशीला पाठक र प्रविशा अधिकारीले संगीतकारबाट हुने यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध मुख खोल्ने साहस गरेका थिए । शेषको धम्कीपछि साहसका साथ सांगीतिक क्षेत्रका केही यौन पिपासुबारे मुख खोलेका गायिकाहरुले भटाभट स्टाटस लेख्न थाले । उनीहरुले ‘आफूले भोगेको तीतो अनुभव सार्वजनिक गरेको तर सबै संगीतकारलाई आरोप नलगाएको भन्दै’ सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थाले ।
मीनाले लेखिन्, ‘मेरो सांगीतिक यात्रामा केही नराम्रा अनुभव पनि छन् तर यो क्षेत्रमा मलाई ब्रेक दिनुहुने लक्ष्मण शेष सरजस्तो व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ जसले मलाई छोरीको दर्जा दिनुभा’को छ र अहिलेसम्म मलाई सहयोग गरिरहनुभ’को छ ।’
के संघ खराब संगीतकारहरुको संरक्षक हो त ? शुक्रबारले संघका अध्यक्ष शेषसँग जिज्ञासा राख्दा उनी नरम देखिए । ‘हुँदै होइन, खराब काम गरेको खण्डमा संगीतकारलाई मात्र के मेरो बुबालाई पनि छोड्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘कोही बदमास छन् भने उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । गायिकाहरुलाई धम्क्याएको होइन ।’
याैन दुर्व्यवहारबारे खुलासा गर्ने गायिकाकाे गुनासाे : म माथि प्रश्न किन ?
संगीत क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने भएकैले यो क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेकी हुँ तर मैले यसरी बोल्दा संगीतकार उल्टै रिसाउलान् भन्ने मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ ।
मलाई त लागेको थियो– खराब संगीतकारविरुद्ध बोल्दा असलहरु खुसी होलान् तर आफूले भोगेको दुव्र्यवहारविरुद्ध बोल्दाको प्रतिक्रिया त्यस्तो आएन ।
कतिपयले पोल नै खोलिसकेपछि नाम किन नभनेको भनेर गुनासो पोख्नुभयो । कतिपयले दुई वर्षअघिको घटना अहिले किन भनेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
पीडा मैले भागेँ । भोगेको कुरा हिम्मतसाथ बोलेँ । तैपनि हाम्रो समाजले मैमाथि प्रश्न गर्दा मलाई बडो दुःख लाग्यो । एउटा संगीतकारबाट भोगेको कुरा सुनाएकी हुँ अरु संगीतकार पनि रिसाएको सुनेँ तर मेरो नियत असललाई चोट पु¥याउने थिएन ।
मेरो लक्ष्य व्यक्तिभन्दा प्रवृत्ति सार्वजनिक गर्ने हो । त्यसैले जसले यस्तो खराब व्यवहार गरे, उनको नाम नभनेकी हुँ । तर अफिसको लोकेसन प्रस्टसँग भनेकी छु, त्यति भन्दा संगीतकर्मीहरुले सजिलै चिन्नुपर्ने हो ।
कतिपयले चर्चामा आउनका लागि यसरी बोलेको होला भनेर आशंका गर्नुभयो । मैले आफैँ शुक्रबारलाई मैले यस्तो भोगेको छु, स्टोरी लेखिदिनु प¥यो भन्दै गएकी थिइनँ । शुक्रबारले मसँग संगीत क्षेत्रमा गायिकामाथि संगीतकारबाट भइरहेको दुव्र्यवहारबारे स्टोरी बनाइरहेको र आफूसँग अनुभव भए सेयर गर्न अनुरोध गरेपछि बोलेकी हुँ ।
मैले चर्चा कमाउँछु या सुपरहिट हुन्छु भन्ने नियतले बोलेकी थिइनँ । मैले भोगेको अनुभव मिडियामार्फत् साटेँ भने भोलि यही क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहिरहेकाहरुलाई खराब प्रवृत्तिबाट जोगिन सहज हुन्छ होला भन्ने सोचेकी थिएँ । सँगसँगै मलाई ठूलो साहस देखाएको भन्दै धेरैले प्रशंसा पनि गर्नुभयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त मेरो परिवार (ममी, ड्याडी)ले मेरो यो हिम्मतको तारिफ गर्दा मैले आफूले राम्रो काम गरेको महसुस गरेँ ।
म त म्युजिक क्षेत्र छाडेर विदेश जाने निर्णय गरिसकेकी व्यक्ति थिएँ । परिवारकै जोडबल र समर्थनले यही क्षेत्रमा अडिएकी हुँ । त्यसैले मैले भोगेजस्तो व्यवहार अरुले भोग्न नपरोस् भनेर बिना कुनै त्रास बोलेकी हुँ ।
तर त्यतिबेला दुःख लाग्यो, जब कतिपयले ‘तिम्रो यसरी बोल्ने बेला भएको छैन, तिमीलाई धेरैले चिन्दैनन्’जस्ता प्रतिक्रिया दिए ।
आफूले भोगेको पीडा बोल्नलाई चर्चित नै हुनुपर्छ ? समय कुरेर बस्नुपर्छ र ?
हाम्रो समाजको चेतना देख्दा÷सुन्दा दुःख लाग्दोरहेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षमा बहस चर्कंदै गए पनि सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरु भने मौन नै बसे । बौद्धिक मानिनेहरुले समेत मुख खोल्ने आँट गरेनन् ।
शुक्रबारले सांगीतिक क्षेत्रका परिचितसँग यसबारे उनीहरुको धारणा सोध्दा भने सबैले पाँच गायिकाको साहसको प्रशंसा गरे । कवि एवम् संगीतकार संगीत श्रोताले ‘गायिकाहरुले जसरी बोले, त्यो वास्तवमै जोखिम, साहस र आँटिलो कदम’ रहेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
‘यस्तो समस्या संगीत क्षेत्रमा मात्रै नभएर अरु क्षेत्रमा पनि छ । त्यसैले संगीत जगत्बाट यसरी आवाज उठ्दा सिनेमा, साहित्य, राजनीति लगायत सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित अभियन्ता र अधिकारकर्मीको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
विन्ध्यवासिनी म्युजिक कम्पनीकी अध्यक्ष लीना रेग्मीले विविध कारणले बोल्न नसकेका सयौं आवाजविहीन युवतीहरुको आवाज पाँच गायिकाले बोलेको भन्दै तारिफ गरिन् । ‘म उनीहरुको हिम्मतलाई सलाम गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘संगीत क्षेत्रको यो मैला सफा गर्न अत्यावश्यक छ ।सुरुवात भयो । खुसी लाग्यो ।’
गायिका जिना रसाइलीले पाँच गायिकाको हिम्मतको प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘हरेक महिला र नयाँ कलाकारले भोग्नु पर्ने पीडा हो यो । कोहीले खुलेर विरोध गर्छन्, कोही अवसर गुमाउने डरमा सहेर बस्छन् । यसले गर्दा झन् गलत गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन्छन् । दुव्र्यवहारको खुलेर विरोध गरौं ।’
बहिष्कारको धम्की !
एकातिर गायिकाको साहसी कदमको प्रशंसा भइरहेको छ भने उता संगीतकारहरु मुख खोल्ने गायिकालाई ठीक पार्ने रणनीतिमा छन् । स्रोतका अनुसार संगीतकारको एक समूहले उनीहरुले माफी नमागे कडा नीति अपनाउन संगीतकार संघलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
संगीतकार संघका अध्यक्ष शेषले भने यसलाई स्वीकार गरेनन् । उनले दुव्र्यवहारविरुद्ध बोलेका पाँच गायिकालाई संघले प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘म ती गायिकाहरुलाई सम्मानित स्थानका साथ अगाडि आउने वातावरण दिनुपर्छ भन्छु । नआत्तिनुस्, संघको पूरा समर्थन र साथ हुन्छ ।’
'केहीले गरेहोलान्, सबैलाई मुछ्न मिल्दैन'
लक्ष्मण शेष, अध्यक्ष, संगीतकार संघ, नेपाल
केही गायिकाले गीत गाउन दिने प्रलोभनमा संगीतकारले यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको कुरा सार्वजनिक गरे । यसमा संघको धारणा के छ ?
अहिले संघ असाध्यै दुःखी र संवेदनशील अवस्थामा छ । केही खराब संगीतकारका कारण सारा संगीतकारहरु दोषी देखिएको अवस्था छ ।
करिअरलाई नै दाउमा राख्दै हिम्मतसाथ सांगीतिक क्षेत्रको विकृति सार्वजनिक गरेका गायिकाको धारणालाई गम्भीर रुपमा लिनुको साटो संघले उल्टो धम्क्याएको देखियो नि ?
तपाईंले संघको प्रतिनिधत्व गर्दै फेसबुकमा हालेको स्टाटस धम्कीपूर्ण थियो, होइन र ?
स्टोरीभरी पीडकको नाम छैन तर मेरो नाम उल्लेख गर्नुभएको छ । मेरो स्टुडियोमा धाउँदा संगीतकारको घिनलाग्दो हर्कत थाहा भएको भनेर लेख्नुभएको छ । यस्तो गर्दा कसको मन दुख्दैन ? म दाबी र गर्वसाथ भन्न सक्छु, मैले अहिलेसम्म कोही गायिकालाई छुन त के त्यस्तो घृणित नजरले हेरेको पनि छैन । अनि मेरो मात्र नाम उल्लेख हुँदा चित्त दुख्दैन होला ? म अहिले पनि भन्छु कोही बदमास छन् भने उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । बदमास मान्छेलाई यो क्षेत्रमा बस्ने एकरत्ति पनि अधिकार छैन । मैले गलत अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेको हो, गायिकाहरुलाई धम्क्याएको होइन ।
स्टोरीमा तपाईंको स्टुडियोको कुरा छ, तपाईंले दुव्र्यव्यहार गरेको भनेर त लेखिएको छैन नि, तैपनि तपाई किन रिसाएको ?
पीडा दिनेहरुको नाम उल्लेख छैन, मेरो मात्र छ, अनि पीडा हुन्न ? अनावश्यक शंका त हुने भयो नि ! एकपल्ट तपाईं मेरो ठाउँमा बसेर सोच्नुस् त– नचाहिँदो विषयमा आफ्नो नाम जोडिदा कस्तो नमीठो लाग्छ होला ?
त्यसोभए संगीतकार संघको निष्कर्ष के हो, सबै संगीतकार असल मात्रै छन् ?
यहाँ सबै संगीतकार सही हुन्छन् भनेर म भन्न सक्दिन । सबै संगीतकार दुधले नुहाएका हुन्छन् भन्ने पक्षमा म छैन । खराबलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ । दुव्र्यवहारका विरुद्धमा उभिनु गलत होइन, यो सचेत नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो ।
तपाईंले फेसबुकमा राखेको संस्थागत धारणामा लेखिएको छ, ‘हाम्रा विरुद्धमा उभ्याइएका ती निर्दोष चेलीहरुलाई गुरुहरुको श्राप नलागोस् बरु छिट्टै सकरात्मक हुने र अभिव्यक्ति सच्याउने सुझाव दिन चाहन्छौं ।’ के यहाँ सबै संगीतकार–गायिकाको सम्बन्ध गुरुचेलीकै हो त ?
सबै संगीतकार–गायिकाको सम्बन्ध गुरुचेलीकै होला भनेर म दाबी गर्न सक्दिनँ । खराब प्रवृत्तिका मान्छे त जुनसुकै पेसा र समुदायमा हुन्छन् नि ! यत्ति हो त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ । मेरो हकमा गुरुचेलीकै सम्बन्ध हुन्छ ।
सुरको बहानामा हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध बोल्ने हिम्मत देखाएका गायिकाहरुलाई संगीतकारहरुले बहिष्कार गर्ने नीति बनाएको सुनिन्छ । यो साँचो हो ?
पुरै गलत हो । ती गायिकाहरु हाम्रा छोरीहरु हुन्, चेलीहरु हुन । म ती गायिकाहरुलाई सम्मानित स्थानका साथ अगाडि आउने वातावरण दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । उहाँहरुलाई नआत्तिनुस्, अझ सफल हुनुपर्छ, संघको पूरा समर्थन र साथ हुन्छ भनेर विश्वस्त पार्न चाहन्छु । हामी अब मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्दैछौं । बरु त्यो अभियानमा पनि उहाँहरुलाई राम्रो स्थान दिन तयार छौं । तपाईंहरुले हामीले हुर्काएको प्रतिभाहरु हो, फूलहरु हो, हामी सधैँ तपाईंहरुको साथमा हुन्छौं । गायिकाहरुलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु ।
यो बोली व्यवहारमा लागू भएको सुन्न पाइयोस् !
लक्ष्मण शेषले कहिल्यै झुट बोल्दैन, ढुक्क हुनुस् ।
‘यी गायिकाको हिम्मतलाई पाठका रुपमा लिनुपर्छ’
संगीत श्रोता, संगीतकार
हाम्रो समाजको पितृसतात्मक संरचना र बजार व्यवस्थाले महिलालाई सधैँ वस्तुगत रुपमा व्यवहार गर्छ, मान्छेको रुपमा गर्दैन । त्यसैगरी कुनै पनि कला साहित्यका क्षेत्रमा पुरुष प्रतिभाले महिला प्रतिभामाथि गर्ने व्यवहार वा हेर्ने दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक नै हुने गरेको छ । त्यसैले यो घटना नौलो होइन किनभने अरुतिर पनि यस्तो भइरहेको छ । पुरुषले महिलालाई त्यस्तै व्यवहार गर्दै आएको देखिदैसुनिदै आएको छ । सुरका बहानामा हुने दुव्र्यवहार पनि हाम्रो देशमा भइरहेका हिंसा, बलात्कार आदि घटनाकै कडी हो ।
सिनेमा, संगीत, साहित्यजस्ता क्षेत्रमा भइरहेका महिलामाथिको दुव्र्यवहार घटना सामान्यतः बाहिर आउने गरेको पाइँदैन । त्यसैले शुक्रबारमार्फत् गायिकाहरुले जसरी बोले त्यो वास्तवमै जोखिम, साहस र आँटिलो कदम हो । यस्तो समस्या संगीत क्षेत्रमा मात्रै नभएर अरु क्षेत्रमा पनि छ । त्यसैले संगीत जगत्बाट यसरी आवाज उठ्दा सिनेमा, साहित्य, राजनीति लगायत सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित अभियन्ता र अधिकारकर्मीको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
गायिकाहरुको यो हिम्मतिलो कदमपछि संगीतकर्मी जो समाजप्रति उत्तरदायी छन्, मान्छेहरुबीच भएको विभेदको अन्त्य गर्न चाहन्छन्, उनीहरुले यस्ता घटनालाई पाठका रुपमा लिनुपर्छ ।
‘ती गायिकाको हिम्मतलाई सलाम’
स्टोरी पढेर म चकित भएँ । सायद म पुरुष भएर होला त्यस्तो दुव्र्यवहार झेल्नु परेको छैन । यदि यस्तो फोहोरी संस्कार कसैले राख्दैछ या संगीतजस्तो पवित्र विधालाई बदनाम गर्दैछ भने उसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । यस्तो गर्नेहरु संगीतकार होइनन्, संगीतको नाममा कलंक हुन् ।
भीम बिसी, संगीतकार
सबै संगीतकार गलत छैनन्, गायक–गायिकाको मर्म र क्षमता बुझ्नेहरु पनि छन् । तर जो गलत छन् उनीहरुका कारण समग्र सांगीतिक क्षेत्रको बेइज्जत भइरहेको छ । एउटा कुरा के भुल्नु हुन्न भने संगीतकारको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउनु र विरोध गर्न पाउनु गायक–गायिकाको अधिकार हो । गायिकाहरुले यति गम्भीर विषय उठाएपछि यसमा सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
अवसर दिने भन्दै यौन दुव्र्यवहार हुन्छ भन्ने मैले पनि धेरै सुनेको हो । यस मामिलामा म लक्की रहेँछु । सधैँ परिवारको साथ रहिरह्यो । ड्याडी मेरो लागि ब्याकबोन हुनुभयो । आफूले दुव्र्यवहार भोग्नपरेन । तर अरूको कुरा जब सुन्छु दुःख लाग्छ । डराउनु, चुप बस्नु भनेको समस्याको समाधान हैन । यस्तो कुरामा तत्काल एक्सन लिनुपर्छ ।
यसबारे संगीतकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरोस् । सबै संगीतकार यस्ता हुँदैनन् भन्ने प्रमाणित गरोस् । अनि जो पीडित भएका छन् उनीहरुले पनि खुलेर विरोध गर्ने बानीको विकास गर्न आवश्यक छ ।
हरेक महिला र नयाँ कलाकारले भोग्नु पर्ने पीडा हो यो । कोहीले खुलेर विरोध गर्छन्, कोही अवसर गुमाउने डरमा सहेर बस्छन् । यसले गर्दा झन् गलत गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन्छन् । प्रतिभा भएका कलाकारको कलाको सम्मान गरौं । यस्तो कामको खुलेर विरोध गरौं ।
यौन दुव्र्यवहार कलाकारमा मात्र नभई यो सबै क्षेत्रको समस्या हो । राम्रो काममा लगाई दिने, प्रमोसन गरिदिने, करिअर सेट गरिदिने प्रलोभनमा हुने शारीरिक र मानसिक शोषण दैनिक सुन्ने देख्ने गरेका छौं । सर्टकर्ट बाटो अपनाउन खोज्दा शोषणमा परिन्छ । यस्ता शोषण अपरिचितभन्दा परिचितबाट भएको प्रशस्त उदाहरण देखेका, सुनेका छौं । अहिलेसम्म प्रत्यक्ष कसैले यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु, मलाई भेट्न आउ भनेको छैन तर भविष्यमा यस्तो समस्या नपर्ला भन्न सकिन्न । अरू क्षेत्रमा जस्तै नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पनि महिलामाथि शोषण र दुव्र्यवहार गर्ने पवृत्तिका व्यक्तिहरु नभएका होइनन् । यस्ता केही व्यक्तिले गर्दा असल र राम्रा व्यक्तिलाई पनि असर परिरहेको छ ।
निलम रोजु राईं, संगीतकार
गायिकामाथि पुरुष संगीतकारले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको खबर पढ्दा दुःख लाग्यो । संगीतकारहरुको त्यस्तो घृणित हर्कतविरुद्ध बोल्ने साहस गरेका गायिकालाई सम्मान गर्नैपर्छ । तर अब यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यस्ता संगीतकारलाई ठाउँको ठाउँ प्रतिकार गर्नुपर्छ । यस्ता संगीतकारबाट जोगिएर हिँड्नुपर्छ । अर्को दुःखलाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो संगीतजगत्मा महिला संगीतकारको अभाव छ । त्यसैले गायिकाहरु पुरुष संगीतकारकै शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चिरन्जीवी भण्डारी, गायक/संगीतकार
केही संगीतकारले यौन दुव्र्यवहार गरे भन्दैमा सबै त्यस्ता हुँदैनन् । तर खराब पनि छैनन् भन्न मिल्दैन । जो कोही संगीतकारले कुनै गायिकामाथि यौन दुव्र्यवहार गर्न खोज्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्नु गायिकाको अधिकार हो । गायिकाले पनि यदि आफूसँग ट्यालेन्ट छ भने कसैसँग सम्झौता गर्न आवश्यक छैन । जे होस्, हिम्मतसाथ आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार सार्वजनिक गरेका गायिकालाई मेरो सलाम ।
तारा लक्सम, गायक/संगीतकार
सांगीतिक क्षेत्रमा भइरहेको यौन दुव्र्यवहारबारे समाचार पढ्दा खुसी लाग्यो । गायिकाको हिम्मतको सम्मान गर्नैपर्छ । गायिकाले हिम्मतसाथ राखेका कुरा केही हदसम्म साँचो नै हो । नाम भन्दिएको भए अझ गज्जब हुन्थ्यो र ती फटाहा संगीतकारले गल्ती महसुस गर्थे । शुक्रबारले यस्तो विषयलाई उठाएर गरेको सुरुवातले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
दुव्र्यवहार व्यक्तिमा भर पर्छ । यदि तपाईं आफ्नै पैसा खर्च गरेर गीत निकाल्दै हुनुहुन्छ भने दुव्र्यवहारमा पर्नुहुन्न । तर यदि तपाईंलाई अरू कसैले नै लगानी गरिदिँदैछ भने तपाईं पीडित हुन सक्नुहुन्छ । मैले यो विषयमा धेरै सुनेको छु । अहिलेसम्म प्रायः मेरा अधिकांश आफ्नै लगानीमा गरेको हुनाले शोषण भोग्नुपरेको छैन ।
केही संगीतकारहरु त्यस्तो होलान् पनि तर सबैलाई मुछ्न मिल्दैन । आफू अघि आउन जे गर्न पनि तयार हुने कोही–कोही गायिका पनि त होलान् नि ? त्यसैले यस्तो हो भने पनि संगीतकारलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन ।
नयाँ गायिकालाई विभिन्न अवसर दिने, नयाँ गीतहरु रेकर्डिङ गराइदिने आदि प्रलोभनमा पारेर संगीतकारहरुले यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको कुरा मैले पनि धेरै सुनेकी छु । त्यसैले यस्ता कुराबाट टाढा रहन कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा गायिका नै सजग हुन जरुरी छ । यहाँ सबै संगीतकार त्यस्तो हुँदैनन् ।
अजय अधिकारी सुशील, गायक/संगीतकार/गीतकार
खोई के भनौं ? सुन्दै नरमाइलो लाग्यो । यस्ता कुरा खासमा हुन नहुने हुन्, तर हुन्छन् । यस्तो हुन नदिन सबै अत्यन्त धेरै सचेत र सजग हुनुपर्छ ।
हरेक गायिकालाई सबै संगीतकारले एउटै व्यवहार गर्छन् भन्ने हुँदैन । सबै संगीतकार व्यभिचारी हुन्छन् भन्ने आशय व्यक्त गर्नु पनि गलत हो । मनोरञ्जनको क्षेत्र समुद्र हो, जसरी समुद्रमा विविधता हुन्छ त्यस्तै सांगीतिक जगतमा पनि विविध खाले मान्छे हुन्छन् । आफूले कस्तो मान्छेको संगत गर्ने र कस्तोको नगर्ने भन्ने कुरा आफ्नो विवेकले निर्धारण गर्नुपर्छ । केही गायिका खुल्नुभयो, आफूले भोगेको कुरा मिडियामा भन्नुभयो यो राम्रो हो । उहाँहरुले यसरी आवाज नउठाउनुभएको भए गलत आशय राख्ने व्यक्तिको मनोबल झन् बढ्थ्यो । तर अब हेप्ने सम्भावना नरहला । अझ भन्नुपर्दा सामाजिक सञ्जालमा गायिकाहरु नै बढी आलोचनाको सिकार भएको देख्न पाइन्छ । जोमाथि दुव्र्यवहार भएको हो उही आलोचित हुनुपर्ने कस्तो परिस्थिति हो यो ?
सिर्जना खत्री (हाउडे माया), गायिका
म ती गायिकाको हिम्मतलाई सम्मान गर्छु । गीतसंगीतको क्षेत्रमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा महिलाले आफूभन्दा सिनियर पुरुषबाट यस्तो हर्कतको सामना गर्नुपरेको सुनेको छु । दोषीमाथि कारबाही हुनुप¥यो नत्र भोलि पनि यही हर्कत नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । अहिले यो विषयले सांगीतिक क्षेत्र हल्लिएको छ । यसको असर निर्दोष संगीतकारमाथि नपरोस् ।
लिना रेग्मी, अध्यक्ष, विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालि
संगीतक्षेत्र धुमिल नै छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । अरूले काने खुसी गर्छन्, गायिकाहरुले प्रस्ट भन्दिए । गायिकाहरुको अभिव्यक्तिले समाजमा भएका र रहेका यथार्थ चित्रण गरेको छ । विविध कारणले बोल्न नसकेका सयौं आवाजविहीन युवतीहरुको आवाज बोलेको जस्तो लाग्यो । ती सबै अवाक पीडाको र पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । म पहिले एक महिला भएर र दोस्रो यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक व्यक्तिको हैसियतले यो हिम्मतको सलाम गर्छु । संगीत क्षेत्रको यो मैला सफा गर्न अत्यावश्यक छ । यसको सुरुवात भएकोमा म खुसी छु । गलतलाई गलत भन्न सक्ने मुटुको मेरो कर्म क्षेत्रमा आगमन भएको छ । आफ्नो स्वाभिमानलाई ठाडो शिरमा राखेर अघि बढ्न म गायिकालाई अनुरोध गर्छु । यस्तो अभिव्यक्तिले अरू कसैलाई दलदलबाट बचाउन सक्छ र ती सम्पूर्ण कुकृत्य गर्नेहरूको मनमा ढ्यांग्रो ठोक्छ ।
दुर्व्यवहारविरुद्ध अमेरिकी आवाज
अमेरिकामा ठूला कम्पनीमा हुने यौन दुव्र्यवहारबारे मुख खोल्न थालेको धेरै भएको छैन । हलिउडमा हुने यौन दुव्र्यवहार ‘ओपन सेक्रेट’का रुपमा सबैलाई थाहा भएकै थियो । त्यहाँ पनि कसैले मुख खोल्ने आँट गरेका थिएनन् । आँट गरे, हलिउड बाहिरका महिलाले । प्रविधि क्षेत्रका महिलाहरूले मुख खोल्न थालेपछि भटाभट अरुले पनि आँट गर्न थाले । फलस्वरुप टाइम्सअप र मिटू ह्यासट्यागले फेसबुक र ट्वीटर रंगीन थाल्यो । कसरी भएको थियो सुरुवात ?
कम्प्युटर इन्जिनियर सुसन फोलरले आफ्नो ब्लग पोस्टमा उबर (ट्याक्सी मगाउने सफ्टवेयर कम्पनी)मा काम गर्दा ताका झेल्नु परेको यौन दुव्र्यवहारका बारेमा टिप्पणी गरेकी थिइन् । यस आलेखको असर के भयो भने तत्काल उबर कम्पनीको मोबाइल एप प्रयोग गरिरहेका अधिकांशले एप मेटाउन र सो ट्याक्सी प्रयोग नगर्न अभियान नै सुरु गर्न थाले । एउटा ठूलो तप्का नै उबर एप मेटाउन थालेपछि कम्पनीका केही कार्यकारीमाथि दबाब पर्न थाल्यो ।
महिला कामदारमाथि यौन उत्पीडन गरेको आरोप लागेपछि उबर कम्पनीमा ठूलो रकम लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ट्रभिस कलनिकलाई राजिनामा दिलाउन बाध्य पारे । यसको असर के भयो भने ठूला र राम्रो आम्दानी दिने कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल बिनारी क्यापिटलका लगानीकर्ता जस्टिन काल्डबेकमाथि पनि सोही किसिमको आरोप लागेपछि आफैँले स्थापना गरेको कम्पनीबाट राजिनामा दिनुप¥यो । उनीमाथि पनि केही महिला व्यवसायीहरूले यौन उत्पीडनको मामिलामा उनलाई मुछेका थिए ।
प्रविधि कम्पनीमा लगानी गर्ने लोअरकेस क्यापिटल लगानीकर्ताहरू डेभ म्याक्लर र क्रिस साका पनि स्त्रीहरूप्रति हुरुक्क हुने र तिनलाई शोषण गर्ने गरेको खबर न्युयोर्क टाइम्सले कैयौँ महिला कामदारहरूले आरोप लगाएको प्रकाशित गरेलगत्तै कम्पनीबाट राजिनामा दिएका थिए ।
गुगलमा काम गरेका पूर्व महिला इन्जियिनरहरूले महिला भएकै कारण त्यहाँ आफूहरू शोषित भएको, कम तलब पाउने गरेको आरोप लगाएर अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । मुद्दा जितेपछि यसैको प्रेरणा लिई उबर कम्पनीमा पहिले काम गरिरहेका र कम तलब पाएका महिला इन्जिनियरहरूले यसलगत्तै मुद्दा हालेका थिए ।
अमेरिकी फिल्म निर्माता हार्भे विन्स्टिनले कैयौँ महिला फिल्म कलाकार तथा प्राविधिकहरूमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको खबर न्युयोर्क टाइम्सले छापेपछि यसले मिटू अभियान सुरु गराएको थियो । अमेजन कम्पनीका कार्यकारी रोय प्राइसले आफूमाथि दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि कम्पनीको पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
नयाँ कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटलिस्ट स्टिभ जर्भेस्टनले आफैँले स्थापना गरेको कम्पनी ड्रापर फिसर जर्भेस्टनबाट राजिनामा दिनुप¥यो । उनलाई पनि उनकै कम्पनीमा काम गरेका महिलाहरूले दुव्र्यवहारको आरोप लगाएका थिए । यस आरोपलाई स्टिभले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सेर्पा क्यापिटलका लगानीकर्ता सेर्भिन पिसेवरले आफ्नै कम्पनीबाट राजिनामा दिनुप¥यो । उनले सो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसै अवधिमा फेसबुककी प्रमुख फानान्सियल अफिसर सेरिल स्यान्डबर्गले कसरी ‘ठूलाबडा’ले आफू सानै उमेरमा कम्पनीमा जागिर खान छिर्दा ‘अनावश्यक ढंग’ले छोएर ‘उपदेश’ दिने गर्थे भनी टिप्पणी गरेकी थिइन् ।